ကြော်ငြာနံပါတ် S-10113491 အတွက် အာရှမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(33'x100')အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ ဘူတာရုံလမ်းမပေါ် ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10112087 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10111678 အတွက် P.M.S Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SL20-002993, For Sale Land, တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ေက်ာက္ကုန္း ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ထပ္အိမ္ေဟာင္းပါ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...
24,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10103135 အတွက် SONE SEE YAR KO LATT REAL ESTATE သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 လမ်းမတန်းတွင် မြေသီးသန့်အဝယ်ရှာနေသော လူကြီးမင်းများအတွက် ရှားပါးဈေးတန်အကွက်လေးရောင်းရန်ရှိသည်။ 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10100330 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(70'x200')အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ် ရှိ မြေကွက်ကျယ် နေရာကောင်း ရောင်းရန်ရှိ
105,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10099638 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(50'x54')အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ ဘောက်ထော်၊ ပြည်တော်အေးလမ်းမပေါ် ရှိမြေကွက် ရောင်းရန်ရှိ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10099432 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 ပါရမီရိပ်သာ နေရာကောင်း၊ လမ်းကျယ်ပေါ်တွင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်ချင်သော လူကြီးမင်းများအတွက် ဈေးနှုန်းတန် မြေကွက်လေး ရောင်းရန်ရှိသည်။ 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10098839 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မိုး​ကောင်းလမ်းနီး ​ဘောက်​​​ထော် 31×105 ​ရှားပါး​သော​နေရာ​လေး
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10097348 အတွက် Toe Tet Htun-တိုးတက္ထြန္းအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်